Hamachi | December 2019
Otu esi amalite iji Hamachi
Usoro Hamachi bụ ngwá ọrụ dị ukwuu maka ịmepụta netwọk nke ọma. Na mgbakwunye, o nwere ọtụtụ ọrụ ndị ọzọ bara uru, na mmepe nke isiokwu a ga-enyere gị aka. Ịwụnye ihe omume ahụ Tupu gị na enyi gị nọrọ na hamachi, ịkwesịrị ibudata ngwugwu nwụnye. Download Hamachi site na ụlọ ọrụ gọọmentị Na otu oge ahụ, ọ ka mma ịga ozugbo na ụlọ ọrụ gọọmentị ma debanye aha.
Otu esi edozie oke anumanu na Hamachi
Ọ bụrụ na-acha anụnụ anụnụ na-egosi na aha aha nke onye na-eme egwuregwu na Hamachi, nke a adịghị bode ọma. Nke a bụ ihe na-egosi na ọ gaghị ekwe omume ịmepụta ọwara mmiri kpọmkwem, ọzọ, a na-eji ihe ọzọ eji eme ihe maka ntinye data, na ping (oge) ga-ahapụ ọtụtụ ihe ga-achọ. Kedu ihe ị ga-eme n'okwu a?
Mepụta netwọk ọhụrụ na mmemme Hamachi
Usoro Hamachi na-emetụta netwọk mpaghara, na-enye gị ohere igwu egwuregwu ahụ na ndị iro dị iche iche na mgbanwe data. Iji malite, ịkwesịrị ịmepụta njikọ na netwọk dị ugbu a site na Hamachi nkesa. Maka nke a, ị ga-ama aha na paswọọdụ ya. A na-enwekarị data dị otú ahụ na forums egwuregwu, weebụsaịtị, wdg.
Esi wepu Hamachi
Ọ na-emekarị na nhichapụ mbụ nke nchekwa ma ọ bụ njikọ anaghị ewepụ Hamachi kpamkpam. N'okwu a, mgbe ị na-agbalị ịwụnye mbipute ọhụrụ, njehie nwere ike ịpụta na agaghị ehichapụ ochie mbipute, nsogbu ndị ọzọ nwere data na njikọ dị. Isiokwu a ga-eweta ọtụtụ ụzọ dị irè iji nyere gị aka wepu Hamachi kpamkpam, ma usoro ihe a chọrọ ya ma ọ bụ na ọ gaghị.
Ịmepụta usoro Hamachi maka egwuregwu kọmputa
Hamachi bụ ngwa ngwa iji wuo netwọk mpaghara site na Ịntanetị, nke nwere interface dị mfe na ọtụtụ mpaghara. Iji rụọ ọrụ netwọk ahụ, ịkwesịrị ịmara njirimara ya, paswọọdụ ịbanye ma mee ntọala mbụ ga-enyere aka hụ na ị ga-arụ ọrụ n'ọdịnihu.
Idozi nsogbu nke ijikọ Hamachi na nkwụnye netwọk
Hamachi - ngwanrọ pụrụ iche nke na - enye gị ohere ịmepụta netwọk gị dị n 'Intanet. Ọtụtụ ndị na-egwu egwuregwu na-ebute usoro ihe omume maka egwu egwu Minecraft, Counter Strike, wdg. N'agbanyeghị mfe nke ntọala ahụ, mgbe ụfọdụ, ngwa ahụ nwere nsogbu nke ijikọta na ntanetị netwọk, nke a na-edozi ngwa ngwa, mana ọ chọrọ ọrụ site n'aka onye ọrụ.
Otu esi edebanye aha na Hamachi ma ọ bụrụ na njehie emee
Ya mere, ị na-amalite Hamachi maka oge mbụ ma na-agba ọsọ ọsọ iji jikọọ na netwọk ọ bụla na egwuregwu, mana njehie na-emetụta enweghị ike ịbanye na ọrụ LogMeIn. N'isiokwu a, anyị ga-atụle nkọwa niile nke ndebanye aha. Ndebanye aha ndị ọzọ 1. Ndebanye aha kachasị mfe iji mezue site na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị ahụ.
Mepụta ihe nkesa egwuregwu kọmputa site na usoro Hamachi
Ọ bụla egwuregwu ịntanetị ga-enwe sava nke ndị ọrụ ga-ejikọ. Ọ bụrụ na-ịchọrọ, ịnwere ike ịme ọrụ nke kọmputa isi na nke a ga-eme usoro ahụ. Enwere ọtụtụ mmemme maka ịmepụta egwuregwu dị otú ahụ, ma taa, anyị ga-ahọrọ Hamachi, nke na-agwakọta mfe na ohere nke iji n'efu.
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na Hamachi adịghị amalite, ma nyocha onwe onye na-egosi
Ọtụtụ ndị na-eche nsogbu dị otú ahụ ihu mgbe usoro ihe omume ahụ na-agba mbọ ịmalite ogologo oge, mgbe ahụ, Hamachi na-agba ọsọ onwe ya, nke na-adịghị eduga ihe ọ bụla bara uru. Ihe ngwọta ga-eju gị anya na ọ dị mfe! Ya mere, ị nwere windo nchọpụta, isi nsogbu nke bụ "Ọnọdụ ọrụ: kwụsịrị".
Hamachi: dozie nsogbu ahụ na oghere
Nsogbu a na - eme ọtụtụ ugboro ma na - ekwe nkwa na - enweghị ike ịbịaru - ijikọta na ndị ọzọ so na netwọk agaghị ekwe omume. Enwere ike inwe ihe kpatara ya: nhazi nhazi nke netwọk, onye ahịa ma ọ bụ mmemme nchedo. Ka anyi dozie ihe niile ka anyi nwee ike. Ya mere, ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na nsogbu nwere oghere Hamachi?
Ịba ụba ọnụ ọgụgụ nke oghere na mmemme Hamachi
Hamachi free na-enye gị ohere ịmepụta netwọk mpaghara yana ikike ị jikọọ aka na ahịa ise n'otu oge. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, enwere ike ịmụba ọnụ ọgụgụ a ruo 32 ma ọ bụ 256 ndị na-eso ya. Iji mee nke a, onye ọrụ kwesịrị ịzụta ndenye aha na nọmba chọrọ nke ndị iro. Ka anyị hụ otú e si eme nke a. Otu esi eme ka ọnụ ọgụgụ nke mkpọda na Hamachi 1 dị elu.
https://termotools.com ig.termotools.com © Hamachi 2019